मोबाइल गेम खेल्न रोक्दा घट्यो यस्तो डरलाग्दो घटना, यो घटनाले सबैलाई बनायो चकित ! – Classic Khabar
September 3, 2021 56
आजभोलि समाजमा मोबाइलले सकारात्मक कुरा मात्र नभई नकरात्मक कुराहरु भित्रएको छ । मोबाइलले हाम्रो जीवन सहत बनाइदिएको छ तर त्यहि मोबाइलका कारण मानिसहरुको जीवन पनि तहसनहस भइरहेको छ । त्यस्तै एउटा घटना भारतको गुजरातस्थित सुरतमा घटना भएको छ जहाँ पिताले जब आफ्नो किशोर छोरालाई मोबाइलमा गेम धेरै नखेल भनेर सधै गा’ली ग र्दा रहेछन। त्यही सुन्न नसकेका छोराले पितालाई घरमा नै घाँ’टी थि’चे’र ह ‘त्या ग’रि’दिएको खबर बाहिरिएको छ ।
यो घटनाले धेरैको मनमा ड’र पै’दा ग’रि’दिएको छ । अबका केटाकेटीहरुले यो घटना बाट के शिक्षा हासिल गर्लान भन्ने प्रश्न पनि खडा गरिदिएको छ । समाजमा दिनदिनै सस्कृति संगै बि’कृतिहरु धेरै फैलिरहेको छ । मृतक अर्जुन अरुण आफ्नी श्रीमती र एक छोरासँग बस्दथे । मंगलबार अर्जुन अरुणलाई उनकी श्रीमती डलीले बेहोसीको स्थितिमा सूरतको नयाँ सिभिल अस्पताल पुर्याइन् जहाँ डाक्टरले अर्जुनलाई मृ’त घोषित गरे । श्रीमती डली र उनका किशोर छोराले त्यतिबेला अस्पतालका डाक्टरलाई अर्जुन आठ दिन अघि बाथरुममा ल’डेको बताएका थिए ।
त्यतिबेला अर्जुनलाई चो’ट ला’गेको र मंगलबार उनी सुतेको स्थानबाट उठ्न नसकेको बताए । मृतक अर्जुन सरकारकी श्रीमती डली र उनका छोराको कुरामा डाक्टरलाई शंका लागेपछि उनीहरुले शवको पो’स्ट’मार्टम गर्ने निर्णय गरे । रिपोर्टमा अर्जुनको मृत्यु घाँ’टी थि’चेका कारण भएको पत्ता लाग्यो । यसबारे प्रहरीलाई जानकारी दिइयो । सोधपुछमा १७ वर्षीय छोराले प्रहरीलाई आफू दिनभरी मोबाइलमा गेम खेल्ने गरेको र यसका लागि पिता अर्जुन सरकारले उनलाई गा’ली ग’रिरहने भएकोले मंगलबार बुवा सुतिरहेका बेला आफूले यस्तो कार्य गरेको जानकारी दिए । प्रहरीले हाल अर्जुनकी श्रीमती डली र छोरालाई हिरासतमा लिएर थप का रवाही सुरु गरेको छ । मोबाइल गेम खेल्नबाट रोक्दा सूरतमा भएको घटनाले सबैलाई चकित बनाइदिएको छ ।
Prevएक कन्याका १० जना श्रीमान, कसरी लाग्थ्यो पालो !
Nextसिद्धार्थ शुक्लाको पार्थिव शरीर अस्पतालबाट निकाल्ने तयारी, भिड थाम्न प्रहरीलाई हम्मे हम्मे